Qormo: Cabdikariin Qalbi-dhadax Oo Ku Haftey Ka Hadalka Tukaraq. W/Q Asadnaa Suudi. – Radio Daljir
Luulyo 10, 2018 5:13 g 0
Ninkii la odhan jiray Xajaaj Ibnu Yuusuf Al- thaqafi ayaa waxaa lagu tilmaami jiray nin xilligiisii bulsho badan dulmiyey, dilay, oo xabsiyo dhigay. Maalintuu dhimanayey ayaa la yidhi ilaahay u toobad keen, wuxuu yidhi: haddaan wax xumeeyey saacadani maaha xilligii toobada la aqbali jiray, haddaan wanaag sameeyeyna maaha saacaddu qofku argagixi lahaa.
Bulsho badan ayaa aad uga hadashay hadal Qalbi-dhagax uu ka jeediyey magaalada Nairobi gaar ahaan colaada Tukaraq waxayna u arkeen in uu hadalkii ka baahay oo ay ahayd in uu si taxadar leh arrinta uga hadlo, iyadoo ay ka sii haboonayd in uu ka aamuso maadaama ay tahay arrin xilligan xaasaasiya isaguna aysan ahayn arrin xaaladiisa saamayn ku lahayd oo uu ku gaabsado oo kaliya in Dagaalka sokooye la joojiyo.
Wuxuu kaloo ka hadlay arrimo badan oo siyaasadda Geeska africa ah. mar uu guda galay arrimaha jamhuuriyadda soomaaliya ma uusan u muuqan nin xog ogaal ah isla markiiba wuxuu ammaan, jibbo kalgacal iyo wanaag aan lasoo koobi karin kala dul dhacay maamulka hargeysa isagoo soomaalida kalena ugu baaqay in maamulkaas lagu daydo. arinkaas ku dheeraanshaha maamulka hargeysa iyo amaanta xad dhaafka ah ee muuse biixi kula dul kufey ayaa waxey ka dhigantahey ama loo arkaa in uu casuumad degdeg ah si dadban uga kadalbanayo.
Arinta Tukaraq ayuu Qalbi-Dhagax si gaar ah uga hadlay isagoo yidhi “waa wax laga xumaado in buqcad yar oo hal kilometers ah in maanta la isku heysto oo aysan mudneyd in lagu dagaalamo”
Hadal kaas oo aad arkayso xog ogaal la’aanta ka haysa waxa la isku haysto iyo inuu si badheedhe ah u yidhiba uu meesha kasaaray in maamulkaa hargeysa duulaan qaawan kujoogaan deegaanada (SSC) calanka buluuga ah oo isagu qudhisu ku taamayo in Gayiga soomalida ka wada lusho isla markaana doonayo in uu jig jiga kataago ay tahey waxa la isku haysto.
Qaabka uu Qalbi-dhagax uga hadlay Tukaraq waxaa si lamid ah uga hadley maalintii Ciida Madaxweynaha Jubaland Mudane Axmed Madoobe oo aad moodaa in labada masuul ay isku aragti ka taagan yihiin Qadiyada arinkaas, balse su’aasha meesha taala ayaa ah miyaan labadoodu wax war ah ka heyn xaalada gobalka Sool gaar ahaan Tukaraq? Maxeyse tahey ujeedka ay ka leeyihiin hadalka dhinaca ka raran oo aad moodid in hal ku dhiga labada mas’uul uu is qooranaayo isla markaasna uu sidii bil sodonkeed ay ugu dhamaadeynTukaraq kaliya?
Si kastabsa ha ahaatee hadalka Qalbi-dhagax uu garta kusiinayo muuse biixi oo isagu ku dagaalamaya dhul aan dhulkiisa aheyn uuna kuxaqiray kuna duudsiyey dhinaca kale dadka dhulkaas dega xaqa ay uleeyhiin dagaalka ay dib uga saarayaan dadka gardarada kusoo weerarey ayaa waxay hibsho gelinaysaa dadka reer SSC oo dhowaan markii qalbi dhagax laxidhay kaxanaaqay si mug leh na uga dhiidhiyey arintii lagula kacey loona arkaayey in dulmiyey oo danbi laga galay.
Marka laga yimaado jaceylka iyo amaanta xad dhaafka ah uu Qalbi Dhagax huwiyey maamulka somaliland, ma looga sheekeeyey in magaalooyinka sida Buco, Barbera, Hargeysa iyo Gabiley aan looga banaan bixin halka degaanada SSC iyo inta kale dhulka soomalidu degto intooda badan ka dhiidhiyeyn xarigii loo geystey Muuse biixin qudhiisu uu Jala ka yidhi.
Hadaba ma la odhan karaa waxaa xaq ah qofkasta oo wax dulmiyey in isagana la dulmiyayo dambiga uu galayna laga gooynayo sidaa daraadeed Qalbi-dhagax sifidaas horey u yeeshey in la darajeeyana aan mudnayn?
Qalbi-dhagax xadhigiisii waa laga xumaaday waana lays garab taagay, laakiin hada wixii ka danbeeya wuxuu ku hadlayo haloo qoro, qodobkiisana yuusan dhaafin.